किन एक्कासी आकाशियो देशभर गोलभेडाको मूल्य ? «
किन एक्कासी आकाशियो देशभर गोलभेडाको मूल्य ?
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०८:२८
के तपाइँ तरकारी किन्न बजार जाँदै हुनुहुन्छ? जानु भयो भने पैसा अलि बढी नै बोकेर जानुहोस्। थोरै पैसा बोक्न भयो भने रित्तै फर्किनु पर्ला!केही दिन यता राजधानी तथा अन्य ठाउँमा तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु भएको छ। विशेषगरी गोलभेडाको मूल्य त झनै आकाशिएको छ। गत हप्ता एक दिनमै गोलभेडाको मूल्य ३० रुपैयाँले बृद्धि भएपछि त्यसपछिका दिनहरुमा थप मूल्य बृद्धि हुदै गएको छ।गत वैशाख २८ गते प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको गोलभेडाको मूल्य २९ गते (१ दिनमै) १ सय १० रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसपछि क्रमश बृद्धि हुँदै १ सय ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ।
‘तरकारीको मूल्य बृद्धि भएपनि ५ रुपैयाँसम्म बृद्धि हुन्थ्यो तर यो पटक गोलभेडाको मूल्य भने एक्कासी ३० रुपैयाँले बृद्धि हुँदा पनि सरकार मुखदर्शक बनिरहेको छ’, गुल्मी स्थायी घर भएका अनामनगरका तरकारी व्यापारी खिमलाल थापाले भने, ‘गत वैशाख २९ गतेदेखि गोलभेडाको मूल्य दिनानुदिन बढ्दै गएको छ, पछिल्लो समयमा भारतबाट आउने गोलभेडा र स्वदेशमै उत्पादित गोलभेडाले अरु तरकारी तुलनामा मूल्य आकाशिदा उपभोक्ताहरु निकै मर्कामा परेका छन्, सरकारले वास्ता गरेको छैन।’ग्रामीण भेगको उत्पादनलाई राज्यले बजारीकरण नगर्दा एकरुपता हुन सकेको छैन। व्यापारी थापाले भने, ‘राज्यले जनताप्रति वेवास्ता गर्यो, राज्य नै परनिर्भर बन्यो। परनिर्भर हुँदा ‘पर’ रोक्ने बित्तिकै ‘वर’ हाहाकार भएको हो। यो विषयलाई राज्यले गम्भिर रुपमा लिनु जरुरी छ।’
अघिल्लो महिनामा भएको असिना र हुरीका कारण यो महिना गोलभेडाको संकट परेको हो। यो महिना लटरम्मै फलेर कृषकले बिक्री गर्ने बेला थियो। अघिल्लो महिना नै हुरी र असिनाले कृषकका फल्नै लागेका तरकारी बारीमा नस्ट गरेपछि यो समस्या आएको हो।व्यापारीहरु नै गोलभेडा १ सय २० रुपैयाँमा किनेर ल्याउँछन्। त्यसमा कति फाइदा खाएर बेच्ने भन्नेमा अन्यौलता रहको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘हामी व्यापारीले नै १ सय २० रुपैयाँ किलोमा किन्नु पर्छ, जसमा १० रुपैयाँ फाइदा खाएर बिक्री गर्ने हो भनेपनि न आफूलाई बेचेजस्तो हुन्छ, न किन्ने ग्राहकलाई नै सन्तुष्ट हुन्छ।’
राजधानी तथा अन्य सहरहरुमा बेला बेलामा तरकारीको हाहाकार हुने गर्छ । कुनै समयमा तरकारीको मूल्य नै नपाएर कृषकले आफ्नो उत्पादनलाई खाल्डोमा गाड्नु पर्छ त कुनै समयमा तरकारी छोइनसक्नु हुन्छ। तरकारीको मूल्यमा सिजन अनुसार पनि एकरुपता नहुँदा उपभोक्ताहरु सधै मर्कामा पर्दै गएका छन्।कालिमाटी फलफूल तथा तरकार बजार विकास समितिका उप–निर्देशक विनय श्रेष्ठको भने, ‘तरकारी (गोलभेडा)को मूल्य आकाशिएको यो वर्ष मात्रै हो। अगाडिका वर्षहरुमा यसरी गोलभेडाको मूल्य यति बृद्धि भएको थिएन।’उपनिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अघिल्लो महिनामा भएको असिना र हुरीका कारण यो महिना गोलभेडाको संकट परेको हो। यो महिना लटरम्मै फलेर कृषकले बिक्री गर्ने बेला थियो। अघिल्लो महिना नै हुरी र असिनाले कृषकका फल्नै लागेका तरकारी बारीमा नस्ट गरेपछि यो समस्या आएको हो।
‘बढीजसो तरकारी भारतबाट आयात हुन्थ्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘यो पटक भारतमा भएको लोकसभा चुनाबका कारण सबै नाकाहरु बन्द भए, आयात हुने सामान पनि ठप्प भयो र उपभोक्ताहरु मर्कामा परे।’पछिल्लो समयमा राजधानीमा मात्रै गोलभेडाको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। अन्य ठाउँमा त गोलभेडाको मूल्य प्रति किलो २ सयबढी पुगिसकेको छ। बन्दा, काउली, सिमी, फर्सीलगायतको तरकारीको मूल्य चुलिँदै गएको छ। करिब ७३ प्रकारको तरकारी बिक्री गर्ने कालिमाटी तरकारी बजारमा पनि सबैभन्दा महंगो भएकै कारण गोलभेडा बिक्री गर्न समस्या भएको व्यापारी बताउँछन्।
सिजन अनुसारको तरकारी उत्पादनमा कमी आएपछि यो वर्ष तरकारीको मूल्य अझै बृद्धि हुने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ विनोद भट्टराईले भने, ‘यो सिजनमा तरकारी खासै उत्पादन हुदैन। भारतबाट आउने तरकारी पनि लोकसभाको चुनाबले बन्द भयो। अब यो बृद्धि भएको गोलभेडाको मूल्य साउनसम्म बढ्दै जानेछ।’नेपालमा वर्षायाम सुरु भएपछि मात्र तरकारी उत्पादनमा सहज हुने उनको टिप्पणी छ। अर्थविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘यो सुख्खा सिजनमा बजार क्षेत्रमा तरकारीको हाहाकार हुनु स्वभाविक हो, वर्षायाममा मात्र तरकारी पर्याप्त भएपछि सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।’